ကျောင်းတိုက်ပေါင်း (၄၀) နဲ့ သီလရှင်အပါး (၃၀၀၀)ကို တစ်လ (၂) ခါ အလှူလုပ်တဲ့ သူဌေးကြီးမိသားစု - Myanmar Red News
ကျောင်းတိုက်ပေါင်း (၄၀) နဲ့ သီလရှင်အပါး (၃၀၀၀)ကို တစ်လ (၂) ခါ အလှူလုပ်တဲ့ သူဌေးကြီးမိသားစု
မရှိလို့ မလှူ မလှူလို့မရှိ ဆိုသလို အလှူအတန်းမှာတော့ ရွှေမြန်မာတွေကတော့ ကမ္ဘာ့နံပါတ် တစ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်…ခုလည်းပဲ သူဌေးကြီးတစ်ဦးရဲ့ သာဓုခေါ်ဖွယ်အလှူတစ်ခုကို ပရိသတ်ကြီးတို့ ဝမ်းသာရအောင် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
အဲ့တာကတော့ သာသနာ့နွယ်ဝင်သီလရှင်တွေကို သီဟသုဓမ္မမဏိဇောတဓရ ဦးအောင်သန်းစိန်နဲ့ ဇနီး ဒေါ်အေးမြင့်သန်း သမီး မစိုးစိုးသန်း မိသားစုတို့ကနေပြီး တစ်လကို သီလရှင်လေးတွေအတွက် ၁၀၀၀ တန်က အရွက် ၂၅၀၀ …၅၀၀၀ တန်ကအရွက် ၅၀၀ ..ပေါင်း ..
အရွက်ရေ ၃၀၀၀ …၁၀၀၀ တန် ၅ ရွက်လျှင် ၅၀၀၀ တန်တစ်ရွက်ညှပ် …အားလုံးအပါး ၃၀၀၀ ခန့်ကို တစ်ပြိုင်ထဲလှူဒါန်းပါတယ်။ဒီလို အပါး ၃၀၀၀ ကျော်ကို လှူသူ ၁၈ ယောက်ခွဲလှူရင် ၁၀ မိနစ် မကြာဘူးလို့ သိရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သီလရှင် အပါး ၃၀၀၀ မလှူခင်မှာ အသက် ၆၀ အထက် ၅၀ ခန့်ကို ၂၀၀၀ ကျပ်စီ အရင်လှူပါတယ်တဲ့ ယယယယ အများလှူတဲ့အခါမှာ ၁၀၀၀ ကျပ်ကျလျှင် ၃၀၀၀ ကျပ်ရမည် ၅၀၀၀ ကျပ်ကျလျှင် ၇၀၀၀ ရပါမယ်လို့ ဆိုပါတယ်…. အလှူက ဒါတင်မကပါဘူး။
ပြီးရင် ကျောင်းတိုက်ခွဲ ၄၀ ကို တစ်ကျောင်းလျှင် ၅၀၀၀၀ ကျပ်စီ ထပ်လှူပါတယ်…. အရုဏ်ဆွမ်းအပါအဝင် တစ်ခါလှူရင် သိန်း 90 ကျပ် ….တစ်လကို နှစ်ကြိမ်လှူ တော့ သိန်း ၁၈၀ ကျပ် လှူတယ်လို့ သိရပါတယ်…တကယ့်ကို ရက်ရောတဲ့ သူဌေးကြီးတစ်ဦးပါပဲ။
ဒီလို အလှူမျိုးကို ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်အောင် ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ရတာပါ…ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း ခုလို အများကြီးလှူနိုင်အောင် ချမ်းသာကြပါစေနော်။
ကြောငျးတိုကျပေါငျး (၄၀) နဲ့ သီလရှငျအပါး (၃၀၀၀)ကို တဈလ (၂) ခါ အလှူလုပျတဲ့ သူဌေးကွီးမိသားစု
မရှိလို့ မလှူ မလှူလို့မရှိ ဆိုသလို အလှူအတနျးမှာတော့ ရှမွေနျမာတှကေတော့ ကမ်ဘာ့နံပါတျ တဈပဲ ဖွဈပါတယျ…ခုလညျးပဲ သူဌေးကွီးတဈဦးရဲ့ သာဓုချေါဖှယျအလှူတဈခုကို ပရိသတျကွီးတို့ ဝမျးသာရအောငျ ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
အဲ့တာကတော့ သာသနာ့နှယျဝငျသီလရှငျတှကေို သီဟသုဓမ်မမဏိဇောတဓရ ဦးအောငျသနျးစိနျနဲ့ ဇနီး ဒျေါအေးမွငျ့သနျး သမီး မစိုးစိုးသနျး မိသားစုတို့ကနပွေီး တဈလကို သီလရှငျလေးတှအေတှကျ ၁၀၀၀ တနျက အရှကျ ၂၅၀၀ …၅၀၀၀ တနျကအရှကျ ၅၀၀ ..ပေါငျး ..
အရှကျရေ ၃၀၀၀ …၁၀၀၀ တနျ ၅ ရှကျလြှငျ ၅၀၀၀ တနျတဈရှကျညှပျ …အားလုံးအပါး ၃၀၀၀ ခနျ့ကို တဈပွိုငျထဲလှူဒါနျးပါတယျ။ဒီလို အပါး ၃၀၀၀ ကြျောကို လှူသူ ၁၈ ယောကျခှဲလှူရငျ ၁၀ မိနဈ မကွာဘူးလို့ သိရပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ သီလရှငျ အပါး ၃၀၀၀ မလှူခငျမှာ အသကျ ၆၀ အထကျ ၅၀ ခနျ့ကို ၂၀၀၀ ကပျြစီ အရငျလှူပါတယျတဲ့ ယယယယ အမြားလှူတဲ့အခါမှာ ၁၀၀၀ ကပျြကလြှငျ ၃၀၀၀ ကပျြရမညျ ၅၀၀၀ ကပျြကလြှငျ ၇၀၀၀ ရပါမယျလို့ ဆိုပါတယျ…. အလှူက ဒါတငျမကပါဘူး။
ပွီးရငျ ကြောငျးတိုကျခှဲ ၄၀ ကို တဈကြောငျးလြှငျ ၅၀၀၀၀ ကပျြစီ ထပျလှူပါတယျ…. အရုဏျဆှမျးအပါအဝငျ တဈခါလှူရငျ သိနျး 90 ကပျြ ….တဈလကို နှဈကွိမျလှူ တော့ သိနျး ၁၈၀ ကပျြ လှူတယျလို့ သိရပါတယျ…တကယျ့ကို ရကျရောတဲ့ သူဌေးကွီးတဈဦးပါပဲ။
ဒီလို အလှူမြိုးကို ပရိသတျကွီးတို့လညျး သာဓုချေါဆိုနိုငျအောငျ ပွနျလညျမြှဝလေိုကျရတာပါ…ပရိသတျကွီးတို့လညျး ခုလို အမြားကွီးလှူနိုငျအောငျ ခမျြးသာကွပါစနေျော။
Previous Post၂၀၂၀ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုသူများရဲ့ အမှတ်စာရင်းကို WEBSITE တွင် အခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်
Next Post(၇၃) နှစ်အရွယ်အဖွား အိမ်လခပေးဖို့ နှင့် ဝမ်းရေးအတွက် ပြောင်းဖူးဖုတ်ရောင်းနေရတဲ့ အခက်အခဲ
သားကိုဆရာဝန်ဖြစ်အောင် ငါးရောင်းရင်းနဲ့ ဆေးကျောင်းထားပေးခဲ့တဲ့ Single Mom
ကျောင်းတွေ ပြန်မဖွင့်ပေးနိုင်ဘူး ဘွဲ့မရလည်း နေလို့ ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောလိုက်တဲ့ ဖိလစ်ပိုင် သမ္မတ
နှင်းဆီပါတီဥက္ကဌဦးကျော်မြင့်အား PPE ဝတ်စုံဖြင့် ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ် တရားရုံး၌ ရုံးထုတ်စစ်ဆေး